संसद विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दिएको रिटमा के छ ? उल्लेख विषय संक्षेपमा : — Imandarmedia.com
संसद विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दिएको रिटमा के छ ? उल्लेख विषय संक्षेपमा :
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को ठुलो झट्का लागेको छ । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ वटा रिट परेको छ ।
उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने परमादेशको समेत मागदाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १३९ सांसदले स्वयम् उपस्थित भएर र ७ जनाले वारेस (प्रतिनिधि)मार्फत रिट पेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।